Fihanaky ny valanaretina: zaza telo taona voan’ny Covid-19 | NewsMada
Fihanaky ny valanaretina: zaza telo taona voan’ny Covid-19
Haingam-pifindra ny valanaretina Covid-19. Lasibatra i Fianarantsoa. 22 ireo marary ankehitriny ary misy ankizy 3 taona marary. Mbola mitohy ny fanentanana amin’ny fanaovam-baksiny.
Tsy mifidy sokajin-taona ary mihanaka ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony, indrindra fa ny eto Fianarantsoa ny Covid-19. Nanomboka ny alatsinainy teo izany ka hatramin’izao. Anisan’ny nanaitra ny maro ny nahitana zaza vao telo taona, tsy afa-bela amin’ity valanaretina ity. “Miovaova be ny taona tratran’io coronavirus io eto Fianarantsoa “, hoy ny governoran’ny faritra Matsiatra Ambony, Razafindrafito Lova, omaly.
Efa mananika ny 22 ireo tranga vaovao any an-toerana amin’izao fotoana ka telo anaty fahasarotana. Efa manaraka fitsaboana ao amin’ny CHU Andrainjato sy Tambohobe ny 17 amin’izy ireo ary samy tsy mbola nisy vita vaksiny avokoa, araka ny nambaran’ny governora ihany. Hentitra ny tomponadraiki-panjakana amin’ny fanajana ny fepetra sakana rehetra, hisorohana ny fiparitahan’io valanaretina io.
Tsiahivina fa miisa 16 500 ireo vita vaksiny ho an’ny faritra Matsiatra Ambony hatreto.
Ankizy valo hafa marary any Taolagnaro
Nahitana ankizy valo voan’ny Covid-19 koa tao amin’ny trano fitaizana zaza kamboty ao Taolagnaro. Nohamafisin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fahasalamana any Anosy izany. Voaporofo tamin’ny fitiliana ny tranga omaly. Tsy mbola misy marary mafy anefa ireo ankizy valo ireo. Ahiboka tanteraka sy manaraka fitsaboana kosa izy ireo mba tsy hamindra.